ရယ်မော ကျန်းမာလူ့ကမ္ဘာ -
သင် ရယ်မောပါ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရယ်မောခြင်းဟာ ဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ ကဏ္ဍ တစ်ခုဆိုတာ သင် သိထားဖို့ လိုပါတယ် ။ ရယ်မောခြင်း ဆိုရာမှာ အသံထွက် ရယ်ခြင်း လှူပ်လှူပ် ခတ်ခတ် ရယ်ခြင်း တိုးတိုး တိတ်တိတ် ရယ်ခြင်း မပွင့်တစ်ပွင့် ရယ်ခြင်း အားပါး တရ ရယ်ခြင်း…. စသည်ဖြင့် ရယ်မောပုံ ရယ်မေနည်း မျိုးစုံ ရှိပါတယ် ။
သင်ဟာ ဘယ်ကဲ့သို့ နည်းနဲ့ပဲ ရယ်ရယ် ရယ်ဘို့ပဲ လိုပါတယ် ။ ရယ်တဲ့ ပုံစံတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပေမဲ့ တူတဲ့အချက် ကတော့ ရယ်မောခြင်းဟာ တစ်ဦးထံမှ တစ်ဦးထံသို့ ကူးလူး ရောက်ရှိ တတ်တာ ပါပဲ ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရယ်သံ ဆိုတာ ပျော်ရွှင်မှူ ပြယုဂ် ဖြစ်ပြီးတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အလိုအလျှောက် မျှဝေခံစား တတ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရယ်မော နေတဲ့ အခါမှာ လူတို့ရဲ့ဦးနှောက်တွင်းရှိ စိတ်ပျော် ဟော်မုန်း serotonin ထွက်ပေါ်လာပြီး စိတ်ကို ကြည်လင် လန်းဆန်း သွားစေပါတယ် ။ လူအများနဲ့ ဆက်သွယ်မှူမှာ ရယ်မောခြင်းဟာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ပျော့ပျောင်းပြီး သက်တောင့် သက်သာမှူ ရရှိစေ ပါတယ် ။ စိတ်ဖိစီးမှူ ပြေလျှော့ပြီး ကိုယ်ခံအား စနစ်ကို ကောင်းမွန် စေတဲ့ အတွက် ရောဂါ ဘယတွေအလွယ် တကူ မဝင်ရောက် နိုင်ပါ ။
“Laughter is the best medicine’ ရယ်မောခြင်းက အကောင်းဆုံး ဆေးဝါး ‘လို့ သုတေသီ တွေက ဆိုထားတာမို့ ရယ်မောကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ ။ ရယ်မောကြတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖြစ်စဉ် ငါးခုကိုသတိပြု နိုင်မှာပါ ။
ရ်ာတဲ့ အခါမှာ သင့်ရဲ့ ဝမ်းထဲကနေ တဆင့်နှူတ်ဖျား ပါးစပ်ဆီမှာ အသံထွက် လာတတ်ကြပါတယ် ။ အသံထွက်ခြင်းမှာ ရယ်စရာရဲ့အခြေခံ အတိုင်းအတာ အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပါးသွားတတ်တာကို တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ လွတ်လပ်မှူ ရှိတဲ့ နေရာမှာ အားပါးတရ ရယ်မောကြပြီး အချုပ်အချယ် ရှိတဲ့နေရာမှာ ထိန်းပြီး ရယ်မောကြရ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အားပါးတရရယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမောသွားတတ်ကြတာသဘာဝပါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ရယ်နေတဲ့အချိန်မှာ မိမိတို့ရဲ့လျှာခင်ဟာအသံအိုးကို ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပြုလုပ်နေရတာကြောင့် အသက်ရှူခြင်းဟာပုံမှန်မဖြစ်တော့ပဲရပ်လိုက်ရှူလိုက်ဖြစ်နေရတာမို့ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှူပ်ရှားမှူအများစုဟာကြွက်သားတွေအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။ရယ်မောတဲ့အခါမှာသင့်မျက်နှာပြင်ကကြွက်သား တစ်ဆယ့်ငါးခုဟာအလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။ပါး ၊ နဖူး ၊မျက်လုံးအားလုံးပါဝင်လှူပ်ရှားမှူနဲ့အတူပါးစပ်နဲ့သွားတို့ပါဝင်တဲ့ကြွက်သားတွေအလုပ်လုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
အားပါးတရ ရယ်မောလိုက်တဲ့အခါမှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သွက်သွက်လှူပ်ရမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုရယ်မောမှူမှာမဆို သငွခန္ဓာကိုယ်ဟာ ငြိမ်ပြီးနေလို့မရအားပါရင်ပါသလောက် ခြေလက်တို့ပါလှူပ်ခါလာမှာဖြစ်တယ်။
သင်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ရယ်မောလိုက်ခြင်းအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေပြေလျော့သွားခြင်းနဲ့အတူစိတ်ကိုပါပြေလျော့သက်သာသွားစေတာမို့နာကျင်မှူတွေ စိုးရိမ်သောကတွေကိုတွန်းလှန်နိုင် မဲ့ ကိုယ် စိတ်စွမ်းအားပိုမိုလာပါလိမ့်မယ်။
သုတေသီတို့ရဲ့အဆီုအရ လူတွေဟာတစ်နေ့ကိုပျမ်းမျှ ၁၇ ကြိမ်ခန့်ရယ်မောဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှန်ရင် စိတ်ညစ် ညူးစရာထက်ပျော်ရွှင်ရယ်မောစရာကို ပိုမိုနစ်သက်လက်ခံလေ့ရှိကြတာမို့သင်လည်းလူဖြစ်ရကျိုးနပ်အောင် ဒီနေ့ကစလို့ရယ်မောစရာတွေရှာပြီးရယ်မောရင်း စိတ်ကိုပြေလျှော့အနားယူလိုက်ပါလို့…။
သငျ ရယျမောပါ ဘာကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ ရယျမောခွငျးဟာ ဘဝမှာ အရေးကွီးတဲ ကဏ်ဍ တဈခုဆိုတာ သငျ သိထားဖို့ လိုပါတယျ ။ ရယျမောခွငျး ဆိုရာမှာ အသံထှကျ ရယျခွငျး လှူပျလှူပျ ခတျခတျ ရယျခွငျး တိုးတိုး တိတျတိတျ ရယျခွငျး မပှငျ့တဈပှငျ့ ရယျခွငျး အားပါး တရ ရယျခွငျး…. စသညျဖွငျ့ ရယျမောပုံ ရယျမနေညျး မြိုးစုံ ရှိပါတယျ ။
သငျဟာ ဘယျကဲ့သို့ နညျးနဲ့ပဲ ရယျရယျ ရယျဘို့ပဲ လိုပါတယျ ။ ရယျတဲ့ ပုံစံတှေ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူကွပမေဲ့ တူတဲ့အခကျြ ကတော့ ရယျမောခွငျးဟာ တဈဦးထံမှ တဈဦးထံသို့ ကူးလူး ရောကျရှိ တတျတာ ပါပဲ ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရယျသံ ဆိုတာ ပြျောရှငျမှူ ပွယုဂျ ဖွဈပွီးတဈဦးနဲ့ တဈဦး အလိုအလြှောကျ မြှဝခေံစား တတျကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ရယျမော နတေဲ့ အခါမှာ လူတို့ရဲ့ဦးနှောကျတှငျးရှိ စိတျပြျော ဟျောမုနျး serotonin ထှကျပျေါလာပွီး စိတျကို ကွညျလငျ လနျးဆနျး သှားစပေါတယျ ။ လူအမြားနဲ့ ဆကျသှယျမှူမှာ ရယျမောခွငျးဟာ ပေါငျးသငျး ဆကျဆံရေး ပြော့ပြောငျးပွီး သကျတောငျ့ သကျသာမှူ ရရှိစေ ပါတယျ ။ စိတျဖိစီးမှူ ပွလြှေော့ပွီး ကိုယျခံအား စနဈကို ကောငျးမှနျ စတေဲ့ အတှကျ ရောဂါ ဘယတှအေလှယျ တကူ မဝငျရောကျ နိုငျပါ ။
“Laughter is the best medicine’ ရယျမောခွငျးက အကောငျးဆုံး ဆေးဝါး ‘လို့ သုတသေီ တှကေ ဆိုထားတာမို့ ရယျမောကွဖို့ မမပေ့ါနဲ့ ။ ရယျမောကွတဲ့ အခါ သငျ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဖွဈစဉျ ငါးခုကိုသတိပွု နိုငျမှာပါ ။
ရျာတဲ့ အခါမှာ သငျ့ရဲ့ ဝမျးထဲကနေ တဆငျ့နှူတျဖြား ပါးစပျဆီမှာ အသံထှကျ လာတတျကွပါတယျ ။ အသံထှကျခွငျးမှာ ရယျစရာရဲ့အခွခေံ အတိုငျးအတာ အပျေါမူတညျပွီး ကှဲပါးသှားတတျတာကို တှကွေ့ရမှာဖွဈပါတယျ ၊ လှတျလပျမှူ ရှိတဲ့ နရောမှာ အားပါးတရ ရယျမောကွပွီး အခြုပျအခယျြ ရှိတဲ့နရောမှာ ထိနျးပွီး ရယျမောကွရ တာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အားပါးတရရယျပွီးတဲ့အခါမှာမောသှားတတျကွတာသဘာဝပါဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ရယျနတေဲ့အခြိနျမှာ မိမိတို့ရဲ့လြှာခငျဟာအသံအိုးကို ပိတျလိုကျဖှငျ့လိုကျပွုလုပျနရေတာကွောငျ့ အသကျရှူခွငျးဟာပုံမှနျမဖွဈတော့ပဲရပျလိုကျရှူလိုကျဖွဈနရေတာမို့ပါ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့လှူပျရှားမှူအမြားစုဟာကွှကျသားတှအေပျေါမှာမူတညျနပေါတယျ။ရယျမောတဲ့အခါမှာသငျ့မကျြနှာပွငျကကွှကျသား တဈဆယျ့ငါးခုဟာအလုပျလုပျကွရပါတယျ။ပါး ၊ နဖူး ၊မကျြလုံးအားလုံးပါဝငျလှူပျရှားမှူနဲ့အတူပါးစပျနဲ့သှားတို့ပါဝငျတဲ့ကွှကျသားတှအေလုပျလုပျကွရတာဖွဈပါတယျ။
အားပါးတရ ရယျမောလိုကျတဲ့အခါမှာသငျ့ခန်ဓာကိုယျဟာ သှကျသှကျလှူပျရမျးသှားမှာဖွဈတယျ။ဘယျလိုရယျမောမှူမှာမဆို သငှခန်ဓာကိုယျဟာ ငွိမျပွီးနလေို့မရအားပါရငျပါသလောကျ ခွလေကျတို့ပါလှူပျခါလာမှာဖွဈတယျ။
သငျနှဈနှဈခွိုကျခွိုကျရယျမောလိုကျခွငျးအတှကျ ခန်ဓာကိုယျကွှကျသားတှပွေလြေော့သှားခွငျးနဲ့အတူစိတျကိုပါပွလြေော့သကျသာသှားစတောမို့နာကငျြမှူတှေ စိုးရိမျသောကတှကေိုတှနျးလှနျနိုငျ မဲ့ ကိုယျ စိတျစှမျးအားပိုမိုလာပါလိမျ့မယျ။
သုတသေီတို့ရဲ့အဆီုအရ လူတှဟောတဈနကေို့ပမျြးမြှ ၁၇ ကွိမျခနျ့ရယျမောဖွဈကွတယျလို့ဆိုပါတယျ။လူမှနျရငျ စိတျညဈ ညူးစရာထကျပြျောရှငျရယျမောစရာကို ပိုမိုနဈသကျလကျခံလရှေိ့ကွတာမို့သငျလညျးလူဖွဈရကြိုးနပျအောငျ ဒီနကေ့စလို့ရယျမောစရာတှရှောပွီးရယျမောရငျး စိတျကိုပွလြှေော့အနားယူလိုကျပါလို့…။